Rasaasa News – Doorashada Golayaasha Baarlamanka Dawladaha Hoose ee Dalka Ethiopia oo Dhacday April 14, 2013.
Doorashada Golayaasha Baarlamanka Dawladaha Hoose ee Dalka Ethiopia oo Dhacday April 14, 2013.
on April 16, 2013 4:29 pm
Doorashooyinka golayaasha baarlamanka dawlahaha hoose, ayaa ka dhacay guud ahaan dalka Ethiopia, gaar ahaana waxay si ka gadisan sidii hore uga dhacday degaanka Somalida Ethiopia.
Degaanka Somalida oo lagu soo kordhiyey 16 degmo oo cusub, ayaa markii ugu horaysay ay doorashadu la bilaabatay doorashada ka dhacda dalka Ethiopia. Arintaas oo ay sabab u tahay isbadalka nabadeed ee ku soo kordhay degaanka Somalida.
Degmooyinka cusub ee 16ika ah, ayaan lahayn haatan xubno ugu jira baarlamaanka degaanka Somalida oo ay tirada xubnihiisu yihiin 184 xubnood.
Baarlamanka dawlada wadaaga ah, degaanka Somalidu wuxuu sharci u leeyahay 25 xubnood, waxaase haatan baarlamanka u fadhiista 23 xubnood, wali ma maqal meel ay dawlada degaanka Somalidu ka sheegayso xubnaha baarlamanka ee ka maqan.
Waxaa iswaydiin leh sida ay doorashada dawladaha hoose uga dhacayso degmooyinka cusub, oo aan wali lahayn xubno u matalala baarlamaan degaanka Somalida? mase suurto galbaa in ay yeeshaan golaha dawladaha hoose iyaga oo aan lahayn xubno baarlamaan ah.
Doorashooyinka dawladaha hoose oo ka dhacay Ethiopia April 14, 2013, ayaa ku dhamaaday si nabad galiya ah. Iyada oo ayna jirin ururu mucaaraday sida ay u dhacday doorashadu.
Xisbiga talada dalka haya [EPRDF], waxaa doorashada uga qayb galay 3.7 milyan oo xubnood, ururada mucaaradkana waxaa uga qayb galay 183 xubnood.
Dhinaca degaanka Somalida, tirada dadka isu diiwaan galiyey in ay cod bixiyaan, waxay ahayd 3,261,867 oo ruux. Sida la sheegay waxaa doorashada degaanka ka qayb galay saddex xisbi oo kala ah; Xisbiga dimoqraatiga shacabka Somalida Itobiya [XDSHSI], oo haya talada degaanka Somalida, Jabhada Gobonimo doonka Somali galbeed [JGSG] iyo Diil-Wabi.
Degaanka Somalida waxay doorashadu ka dhacday 875 goobood iyo 68 degmo oo uu ka kooban yahay degaanka Somalida Itobiya.
Hanaankii baarlamaaniga ahaa ee ka jiri jiray degaanka Somalida Itobiya, waxaa uu ahaa mid ka fog cadaalada. Waxaana wax lagu qaybin jiray qabiil intii lagu qaybin lahaa degmo. Nidaamkaas cadaalada ka fog waxaa dajiyey Cabdi-majiid, oo ula dan lahaa cadaadis beesha ay ka soo jeedeen Jabhadihii dagaalka kula jiray Ethiopia. Waxaa jirta in degmo hoostagta gabal ay ka baarlamaan badnaato magaalo madaxda gabalkaas ay hoostagto.
Arimahaas waxaa la filayaa in ay dawlada maanta jirta wax ka badali doonto, cadaadiskii loogu talo galay colaada oo maanta dhamaatay nabad galiyo buuxdana ay ka jirto degaanka Somalida Ethiopia.
Codbixinta golayaasha dawladaha hoose oo ka dhacaday guud ahaan Ethiopia April 14, 2013, ayay maalin ka dib degaanadu u direen sanaadiiqda cod bixinta gudiga doorashada Qaranka, kuwaas oo soo saari doona natiijada doorashada qaranka May 10, 2013.
Doorashooyinka golaha degaanku, waxayna ka dhicin Maamulka Addis Abab iyo Qoomiyada koonfurta oo ay doorashooyinkoodu dhacayaan April 21, 2013.